Olee otú anyị pụrụ iji stepper moto - China Changzhou chọsiri ike Motor
Stepper moto akara bụ a na ngwaọrụ na akara ahụ ọnọdụ, ọsọ na torque nke a n'ibu drive. Ọ e mere maka ngagharị akara nke electric Motors. Ọ nwere akpaka nnyefe na ntuziaka maka malite na ịkwụsị engine, na nhọrọ na ukpụhọde nke ọsọ.
Ọzọkwa na-atụ anya iji họrọ ma na-atụ ma ọ bụ laa azu adiana megide overloads na-anaghị emezi emezi, na kpatụ torque. Onye ọ bụla electric moto na-onwem na regulator nwere dị iche iche na ọrụ na atụmatụ. N'itinyekwu moto njikwa nwekwara ike nyere aka kpuchido na ibu Motors nwere bufee ma ọ ugbu a ọnọdụ. Nke a na-eme na bufee agba anọ nchedo ma ọ bụ okpomọkụ N'ịchọpụta ọsọ agba anọ. Fuuz na circuit Oké mmali nwekwara bara uru n'ihi na nchedo n'elu ugbu a. Automatic moto ọkwọ ụgbọala na-na-ọnọ na ịgba switches iji chebe igwe.
Ụfọdụ mgbagwoju moto controllers na-eji aka ịchịkwa ọsọ na torque Motors ejikọrọ. Na a mechiri emechi-akaghị akara, a njikwa na-arụpụta ezi ihe n'ọnọdu na engine nọmba on a lathe-achịkwa. The moto njikwa n'ụzọ ziri ezi ọnọdụ ọnwụ ngwá ọrụ dabeere na tupu kenyere profaịlụ. Ọ na-ụgwọ dị iche iche ibu ọnọdụ na ọgba agha ka enyere ịnọgide na-enwe ọnọdụ nke ngwá ọrụ.
Motor controllers dabeere na ihe ha ahapụwo ime. E nwere akwụkwọ ntuziaka moto akara, akpaka moto akara na moto akara n'ebe dị anya. Dabere na emeputa, moto njikwa nwere ike na-enwe a mmalite na-akwụsị. Ma e nwere ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala ndị na-achịkwa ihe engine na ọtụtụ atụmatụ. An electric moto ịchịkwa ike nkewa dị ka ụdị nke moto ka a chụpụrụ ma ọ bụ na-achịkwa. Nke a bụ ngagharị akara servo, nzọụkwụ Motors, nwetụ ugbu a ma ọ bụ AC ugbu a ma ọ bụ DC ahịhịa ma ọ bụ brushless DC na-adịgide adịgide magnet.
Post oge: Ka-29-2018